Ka Faaiidayso:BARBAARINTA ILMAHA EE WANAAGSAN!HALKEE LAGA BILABAA??
Posted by shiikha on 13/01/2013 05:46:10
Halkee laga bilabaa barbaarinta ilmaha ee wanaagsan? waa su´aal aad muhiim u ah, una baahan inaan si wanaagsan uga fikirno, jawaab sax ahna ka bixino. Waxaa dhab ah inayna ahayn inaan ka bilowno sidaan ilmaheena uga reebi lahayn madax adayga, beenta iyo waxyaabaha la midka ah. Sidoo kale sax ma aha inaan ka bilowno; sidaan ilmaheena uga dhigi lahayn kuwa guul sare ka keena waxbarashada, qaata shahaadooyin sare. Kahor intaan su´aashaa laga jawaabina waxaan weydiin lahaa dhawr su´aalood oo laga yaabo inay jawaabta inoo soo dhaweyn lahayeen.
Waalidow; meeqa jeer baad ka fikirtay habka ama sida aad rabto inay ilmahaagu u ekaan lahayeen? Meeqa jeer baadse ka fikirtay sida ama habka aad jeclaan lahayd inay ilmahaagu kugu arkaan adiga laftaada? Meeqaad ka fikirtay waxa aad ilmahaaga ka rabto? Meeqaadse ka fikirtay waxa ay ilmahaagu adiga kaa rabaan? Waxaa badan waalidku inay ku dadaalan siday u heli lahaayeen shaqo fiican si ay ilmahooda ugu helaan cunto, cabitaan iyo nolol fiican, mudo kadibna ay aad uga shalaayaan maxay ilmahooda si fiican ugu barbaari waayeen!!
Waalidow, hubso tallaabada koowaad inay tahay inaad ka fikirto naftaada, inta aadan ka fikirin ilmahaaga! Guusha furaha barbaarinta wanaagsani waa in la helo; barbaariye wanaagsan, waalid wanaagsan!! Ee adigu ma tahay barbaariye wanaagsan, oo leh garasho iyo garaad uu wax ku barbaariyo!! Ilmuhu waa Laan ka baxday geed, waxayna noqonaysaa sida uu geedkii asalka ahaa u yiilay. (kullu shay yarjicu ilaa aslih); Shay kasta wuxuu u laabtaa siduu asalkiisii hore ahaa).
Ilmaheenu ma soo dhalanin iyagoo been sheegaya, ama iyagoo madax adag oon waxba maqlaynin, balse waxay soo dhasheen iyagoo jilcan, diyaarna u ah inaan u samayno sida aan inagu ka dhigno. Haduu waalidku noqon lahaa mid leh farsamo fiican, dadaal badan iyo aragti sarana, wuxuu soo saari karaa dhismo qurux badan.
Mana jiro qof sababsan kara inuusan hada waxba qaban Karin, oo fursadii ay dhaaftay, balse qof kasta oo dadaalaa guulo fiican buu gaari karaa, hadiiba uu la yimaado niyo adag iyo dadaal tafa tiran oo habaysan.
Hadaba Ma yeeli karnaa inaan mudo gaaban is ilowsiino, dhibatooyinka iyo qaladaadka ilmaheena, oo aann ka fikirno toosinta nafteena, hagaajinta dhaqankeena? Waxaana dhab ah inay taasi wax weyn ka badali lahayd qaladaadkii ilmaheenu samayn jireen, ama ay
lahaayeen maxaa yeelay waxaan u noqon lahayn tusaale sax ah, oo caqligooda ku reeba raad wanaagsan.
Waalidow; waxaad yeeli kartaa inaad ilmahaaga u noqoto waalid aad u qiimo badan, shaqada barbaarintana ka dhigto xirfad sharaf badan. Waxaa lahubaa waalidku inuu jirada ku dhacda ilmaha jirkooda aad uga walaaco, uga fikiro, dadaal badana ku bixiyo siduu u daaweyn lahaa. Hadaba ma yeeli karnaa inaan sidaa oo kale ugu dadaalo sidaan ilmaheen naftooda, caqligooda iyo qalbigooda ugu barbaarin lahayn caafimaad, khayr iyo wanaag?
Maka fikirtay marna, intaad dadaal iyo lacag ku bixin lahayd haduuna Ilaahay ilmo ku siinin, mase yeeli kartaa inaad dadaalkaa nuskii ku bixiso, sidaad ilmahaaga uga dhigi lahayd kuwa aad qiimo, raaxo iyo khayr badan dareento, markaad aragto iyaga iyo camalka wanaagsan ee ay samay-nayaan?. Haduu Rabbi ku siiyo shaqo wanaagsan iyo lacag fara badan, balse aad ka gaabiso barbaarinta ilmahaaga, waxaa la hubaa inaad jeclaan lahayd, inuu waqtigu dib kuugu soo noqon lahaa, si aad waqtiga badankiisa ugu bixiso barbaarinta wanaagsan ee ilmaha.
Ilmahaagu armay agoon yihiin? Agoonku ma aha ilmaha ay waalidkood dhinteen, ee agoonta dhabta ahi waa ilmo leh waalid ka mashquulay ama ka sii jeedsady barbaarintiisa iyo wax baridiisa. Maka fikiratay ilmahaagu waxay kugu soo xasuusan doonaan! Waxaad oran kartaa waxaan siin jiray lacag ay wax ku iibsadaan, shaqo dhib badan baan qaban jiray si aan lacag ay ku raaxaystaan ugu keeno, waxaase hubaal ah xasuusta iyo mahada ugu fiican ee aad ilmahaaga ka sugi kartaa inay tahay mida aad ku toosin jirtay, ku dhisi jirtay caqligooda, garaadkooda, diintooda iyo dhaqan-kooda intaba.
Maxaa yeelay hadaad samayso sida ay waalidka badankoodu sameeyaan (in ilmaha cuntadooda iyo noloshooda la maareeyo), hubso inaada helaynin wax ka duwan waxa ay waalidka badankoodu helaan/ goostaan= ilmo aan toosnayn, dhaqan fiicnayn, madax adag, diida badan, oo dhiba waalidka!!
Kuna bishaarayso in wanaag kasta ood ilmahaga barto, ajarkiisa aad goosan doonto marar badan, oo marka kowaad, Rabbi baa kaaga raali noqon, marna bulshadaada ayaad wanaag u abuuraysaa, khayr u talaalayasa, marna ilmahaagaa kuu wanaag fali doona/ kuu ducayn doona markay ka faa´iidaystaan wanaagaad bari jirtay markay yaraayeen.
Abwaan baa yiri; waa doqonimo, inuu waalidku dadaal badan ku bixiyo, siduu maal badan u kasban lahaa, isagoo hilmaamay, ama ka gaabiyay inuu dadaalkaa oo kale ku bixiyo, barbaarinta iyo maskax dhisida ilmihii maalkaa dhaxli lahaa!.
Xigasho: Axmed Salah (A/Diinaash)